The Ab Presents Nepal » जनतामाथि प्रहार गरिरहे सरकार ढालिदिने काँग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी!
जनतामाथि प्रहार गरिरहे सरकार ढालिदिने काँग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी!
काठमाडौं -: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले जनतालाई दुख दिइरहने हो भने आफुहरु सरकार ढाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । अहिलेको सरकारले पटक पटक लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुनेकाम गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार पार्टी निकट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले सरकारको काम प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकहरु पारित हुन नदिने दाबी गरेका छन् ।
काँग्रेसको इतिहासलाई स्मरण गर्दै सभापति देउवाले ‘लोकतन्त्रको लागि राणा, पञ्चायत र राजतन्त्रलाई ढालेको काँग्रेसलाइ केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नु ठुलो कुरा नभएको बताए । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीले विना अवरोध काम गर्न दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति June 28, 2019